Qarax Ka Dahacay Caawa Guriga Wasiirka Xanaanada Xoolaha Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Qarax Ka Dahacay Caawa Guriga Wasiirka Xanaanada Xoolaha Somaliland
Hargeysa(ANN) Qarax ayaa ka dhacay caawa fiidkii guriga uu deganyahay wasiirka Xanaanada Xoolaha Somaliland Dr. Axmed Xaashi Oday oo ku yaala xaafada shacabka ee magaalada Hargeysa, kaas oo qiyaastii dhawr mitir dhinaca galbeed ka xiga guriga uu deganyahay Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo).
Ma jirto cid wax ku noqotay, balse waxa dumay giraadka meesha qaraxu ka dhacay oo ah Qolka hurdada ee gurigaa. Sida ay shebekada wararka u xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada qoyska oo xiligaa galay guriga. Waxaana durbadii halkaa yimi ciidanka aamaanka, iyadoo ay ciidanka baadhista denbiyadu wadaan hawl baadhis ah oo ku saabsan sababta keentay qaraxa.
Qaraxa ayaa loo malaynayaa inuu qaraxu ka dhashay qasaalada dharka lagu maydho, balse waxa kale oo qaraxaa lagu sheegay mid uu sabab u ahaa hiitarka kululeeya biyaha. Wasiirka degan guriga Dr. Axmed Xaashi Oday ayaa isagu ka maqnaa guriga, isagoo ka mid ah wefdi ka tirsan xukuumada somalialnd oo safar ugu baxay dalka Kenya. Laakiin qoyskiisa ayaa ku sugnaa guriga, isla markaana ma jiraan wax khasaare ah oo soo gaadhay. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka Bilayska ayaa shebekada wararka ee araweelonews u xaqiijiyay in baadhis ay wadaan si loo xaqiijiyo sababta keentay qaraxa.